Kintan’ny Kung Fu: ho avy eto Madagasikara i Jackie Chan | NewsMada
Kintan’ny Kung Fu: ho avy eto Madagasikara i Jackie Chan
Araka ny fanambaran’ny solontenany, i Xiao Ang, teo am-pahatongavana teny Ivato, omaly tolakandro, ho avy eto Madagasikara, amin’ny volana jona izao ilay mpilalao sarimihetsika malaza sady kintan’ny kung fu, Jackie Chan. Hisy ny fanatontosana sarimihetsika hataony amin’izany.
Tohin’ny nahavoatendry an-dRamaherison José, filohan’ny federasiona malagasy ny kung fu wushu, ho filoham-boninahitry ny Temple Shaolin, sy taorian’ny nandefasan’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera ny taratasy fangatahana, ho avy eto Madagasikara i Jackie Chan, hamatsy vola sy hanatontosa horonantsary. Zava-dehibe ho an’i Madagasikara ny fahatongavany eto amintsika satria ankoatra ny fanatanjahantena sy ny maitre Gao, ho hita taratra ao anatin’ny horonantsary hotontosain’i Jackie Chan ny mahakasika an’i Madagasikara iray manontolo, indrindra ny fiaraha-miasa amin’ny firenena sinoa. Nanambara i Xiao Ang, mpanatontosa horonantsary sady mpilalao miaraka amin’i Jackie Chan, fa voalohany eto Afrika hisitraka izao fanatontosana horonantsary izao ny firenena malagasy. Omaly, tonga teto an-toerana ary hijanona mandritra ny herinandro ireo solontena miisa efatra, hanao fanadihadiana sy hijery izay toerana rehetra hanodinana ity horonantsary ity. Amin’ny volana jiona kosa, raha tsy misy ny fiovana, ny ho tonga eto Madagasikara ilay mpilalao horonantsary malaza sy ankafizin’ny maro, i Jackie Chan. Tsahivina fa efa imbetsaka ny nahahenoana izao fahatongavany eto amintsika izao. Ny taona 2013 no nahahenoana izany farany, raha ny loharanom-baovao, saingy antenain’ny maro fa tsy honohono intsony ny amin’ity indray mitoraka ity.
Tsara ny manamarika fa isan’ny vy nahitana izao fiaraha-miasa amin’i Jackie Chan izao ny Takalo Tsara, mbola Ramaherison José na ny maitre Gao ihany koa ny filoham-boninahitr’ity fikambanana ity. Anisan’ny tonga nitsena ireo delegasiona misolo tena an’i Jackie Chan teny Ivato ny eo anivon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena izay nanambara fa voninahitra lehibe ho an’i Madagasikara sy ny taranja kung fu malagasy izao hetsika izao. Mbola hisy ny fandraisan’ny fitondram-panjakana ireto delegasiona ireto, handinihana sy hiresahana mahakasika ny fandaharam-potoan’izy ireo mandritra ny herinandro hijanonany eto.